गगन थापाको प्रश्न, ‘कर्मचारीको काम गर्ने शैली कहिले फेरिन्छ ?’ | Nepali Health
गगन थापाको प्रश्न, ‘कर्मचारीको काम गर्ने शैली कहिले फेरिन्छ ?’
कर्मचारी भन्छन्, 'सय दिने योजना माग्ने, तीस दिन पछि सरुवा गर्न थाल्ने अनि अहिले परिणाम खोज्ने ?'
२०७३ मंसिर १ गते १६:३३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १ मंसिर – स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफ्नो निर्देशन पछि पनि कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्ने शैली नफेरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले कर्मचारीको पुरानैशैलीका कारण स्वास्थ्यमा आफूले चाहेजस्तो उपलव्धी नदेखिएको भन्दै कार्यशैलीबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आज देखि राजधानीमा सुरु बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्ने क्रममा उनले नयाँ योजना र कार्यविधिहरु ल्याउन नसकेको र गुनासा मात्रै हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिले पनि हामी यो भएन त्यो भएन, पाइएन र सकिएन मात्रै भन्ने गरेका छौँ तर किन भएन, के भए हुन्थ्यो, कसरी सकिएन के भए सकिन्थ्यो भन्ने कुरा नै आएन । यो पुरानै शैली भयो । अहिलेसम्म पनि तपाईँहरुले शैली बदल्न सक्नुभएन’ मन्त्री थापाले भने ।
उनले सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन नगर्ने तर परिणाममा परिवर्तन खोज्ने अनौठो बानी रहेको भन्दै यसले स्वास्थ्य जहाँको तही रहने बताए । उनले यसअघिका क्षेत्रीय समिक्षा गोष्टीमा जे कुरा आएको थियो । केन्द्रीय गोष्टीमा पनि उही आएको भन्दै यसलाई परिर्वतन गर्न सुझाव दिए ।
मन्त्री भए देखिनै सय दिने कार्ययोजना अघि सारेका मन्त्री थापाले एक महिना पछि नै कर्मचारी सरुवामा हात हालेका थिए । समूह र पद्धती भन्दा पनि सकेसम्म नजिकका व्यक्तिलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गरेका मन्त्री थापाले अहिले कार्ययोजना अनुसार काम खोज्नु नै हास्यास्पद भएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘मन्त्री ज्यूले कम्तीमा तीन महिना पर्खनुपथ्र्यो । योजना लिएको एक महिना पछि यता र उता बनाइदिनुभयो । अहिले पनि कतिपय ठाँउमा सरुवा हुँदैछ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुन्छ ? एक ठाँउको अर्को ठाँउमा पुरयाइदिएपछि सबै नयाँ हुन्छ । त्यसैले काम हुन सकेको छैन् ,’ उनले भने ।
यद्धपी मन्त्री थापाले आफू जनताले देखिने गरी नतिजा दिने पक्षमा रहेको पटक पटक दोहोरयाए । ‘म अव काम गर्ने शैली नै परिर्वतन गर्छु तपाईँहरु जे सुकै भन्नुस । यसरी पटक्कै भएन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले कार्ययोजना कसरी सफल बनाउने भन्नेबारेमा समिक्षा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा पुष्पा चौधरीले वर्तमान अवस्था र भावी योजना बारेमा प्रस्तुति गरेकी थिइन् ।
रुपन्देहीमा ३६ जना डेङ्गुबाट सङ्क्रमित
अब बीर अस्पतालमा टिकट लिन लाइन लाग्नु नपर्ने